Filtrer les éléments par date : mercredi, 10 juillet 2019
mercredi, 10 juillet 2019 20:27
Angela Merkel: Tratran'ny bemangovitra
Nandritra ny fandraisana ny praiminisitra finlandais, Antti Rine, androany, no tsy nitsahatra nangovitra ity chancelière allemande ity.
Fanintelony izao tao anatin'ny iray volana.
Mametram-panontaniana ny maro amin'ny fahasalaman'i Angela Merkel, raha manamafy izy fa tsy misy atahorana ny fahasalamany.
Ny volana oktobra tamin'ny taon-dasa moa no efa nilazany fa tsy hitantana ny antoko CDU intsony izy, raha 18 taona no nitaritany izany antoko politika izany, ary dia tsy hanavao ny filatsahany ho chancelière intsony, fa dia hijanona izy rehefa vita ity taom-piasany ity, ny taona 2021.
mercredi, 10 juillet 2019 20:26
Diplomasia: Krizy eo amin'ny Amerikanina sy ny Angilisy
Efa teny ambony gazety vao samy taitra ny rehetra, nahita ny tatitra tsiambaratelo nataon'ny ambasadaoro angilisy, Kim Darroch, miasa any Amerika, ho an'ny fitondrana angilisy.
Milaza ity tatitra tsiambaratelo ity, fa "tsy milamina, ary tsy mahay ininona ("instable" et "incompétent") ny filoha Donald Trump, ary ny fandraharana amerikanina dia "tokana amin'ny tsy fanjariany ('"unique dans son dysfonctionnement").
Toy ny mahazatra moa dia tsy niandry ela ny filoha amerikanina tamin'ny alalan'ny Tweet, nanamaivoka an'ity diplomaty agilisy ity, ary nilaza mazava fa tsy mila mifandray amin'olona "vendrana sy donto ("stupide")" intsony, ary mitsahatra ny fifandraisana amin'ny Angilisy amin'ny alalan'ity ambasadaoro ity.
mercredi, 10 juillet 2019 19:14
Amoron’Akona: Misy fanorenana toby famatsian-drano vaovao
Hamatsy an’ireo faritra tsy ampy rano eny Ambohimangakely ity toby famatsian-drano madio aorina eny Amoron’Akona, manamorona ny lalana « By-Pass » ity, ary vinavinaina ho vita amin’ny faran’ny volana aogositra 2019 ny asa rehetra.
Tonga amin’ny fetra fahafahana mamatsy rano ny Jirama, izay niteraka olana ara-pamatsiana amina faritra maromaro eto amin’ny tananan’Antananarivo. Nampihatra tetikasa fanamboarana fotodrafitrasa ho an’ny fahamehana, hanampiana amin’ny famatsian-drano, ny governemanta, ka io no heverina hamahana ny olana ao anatin’ny fotoana fohy.
Nijery ny fandrosoan’ny asa fanamboarana teny an-toerana, androany maraina, ny Sekretera Jeneralin’ny governemanta, Razanadrainiarison Rondro Lucette ; asa izay tanterahina eo ambany fiahian’ny ministera misahana ny rano, ary iarahana miasa amin’ny orinasa Jirama.
mercredi, 10 juillet 2019 16:10
Fitsinjaram-pahefana: Hisy fandrafetana politika vaovao
Zavatra telo no ilaina amin’izany, hoy izy dia ny fizarana ny fahefana any amin’ny faritra, mba hahafahan’ireo tompon’andraikitra manapa-kevitra haingana sy mitondra vahaolana ho amin’ireny olana maro samihafa sy laharam-pahamehana hita any ifotony ireny, fa tsy hiandry ny vahaolana avy aty amin’ny fanjakana foibe hatrany.
mercredi, 10 juillet 2019 15:24
Kitra – Ligin’i Bongolava: Voafidy ho filoha i Rakotoniaina Mamonjisoa
Notanterahina androany teto Tsiroanomandidy ny fifidianana izay ho filohan’ny ligin’ny baolina kitra Bongolava. Taorian’ny fihodinana faha-4 vao vita ny fifidianana, ka Rakotoniaina Mamonjisoa no voafidy ho filoha.
mercredi, 10 juillet 2019 15:19
Lalaon’ny Nosy: Maniry hampiantrano ny andiany faha-XI i Madagasikara
Mandalo eto Madagasikara ny delegasiona avy amin’ny Komity iraisam-pirenena momba ny lalaon’ny Nosy, mijery ireo toerana hisy ny foto-drafitrasa handraisana ny Lalaon’ny Nosy andiany faha-XI amin’ny taona 2023 araka ny fanirian’i Madagasikara.
Hanokana 150 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy, hanarenana ireo fotodrafitrasa efa misy sy hanorenana vaovao, ka lehibe amin’izany ny fananganana ny « Academie Nationale des sports » amina velarantany mirefy 9 hektara eny amin’ilay tanàna vaovao « Tanamasoandro », tetikasan’ny filoha Andry Rajoelina.
Nandray ary nitarika ireto delegasionina ny Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ireo teknisianin'ny ministera, ary ny avy eo amin'ny fiadidiana ny Prezidansa sy ny filohan'ny Komity Olimpika.
mercredi, 10 juillet 2019 15:18
Anosizato - Antananarivo: Tra-tehaka teny am-pampiadiana akoho ilay mpanolana sady mpanendaka
Mpivady tratra alina no nosakanana lehilahy miisa 03 rehefa tonga tany amin’ny toerana mangingina, teny an-dalana hamonjy fodiana. Nodarohan’izy ireo ilay raim-pianakaviana ka rehefa tsy nahatsiaro tena dia nalefany tao anaty tatatra. Ilay renim-pianakaviana, izay nitondra vohoka roa volana, kosa dia nentin’izy ireo tamina toerana iray tsy lavitra teo ka dia nanaovan’izy ireo filan-dratsy ary mbola lasan’ireto jiolahy ny firavaka sy ny vola tany amin’izy mivady.
Nametraka fitoriana tany amin’ny Polisy izy mivady. Nanokatra fanadihadiana sy nanao famotorana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Fantatra tamin’izany ny toerana nipetrahan’ireto olon-dratsy.
Nidina ifotony avy hatrany ny Polisy, saingy efa nitsoaka tsy tao intsony ireto jiolahy.
Nitohy ny fikarohana ka tra-tehaka teny am-pampiadiana akoho teny Anosizato ny iray tamin’ireo jiolahy. Niaiky ny heloka vitany ity jiolahy ity ary fantatra fa mpirahalahy avokoa izy ireo no nanao io asa ratsy io. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny Polisy.
mercredi, 10 juillet 2019 14:19
Fibatana fonjamby: Nandrombaka medaly volamena 5 tatsy Kenya ny Malagasy
Namiratra ny solontena malagasy nandritra ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, amin’ny taranja fibatana fonjamby natao tatsy Kenya. Medaly volamena 5 miampy volafotsy 1 no vokatra azon’ny Atleta malagasy tany an-toerana.
Ny fandraisana anjara tamin'io fiadiana ny tompondakan’i Afrika io dia anisany antoka hahazoana tapakila handraisana anjara amin’ny lalao Olympika hatao any Tokyo Japon amin'ny taona 2020.
Nicolas Dupuis: Hotazomina hanazatra an’ny Barea
Hotazomina ho mpanazatra an’ny Barea an’i Madagasikara hatrany i Nicolas Dupuis, aorian’ny CAN. Efa nisy dinika vita momba izany teo aminy sy ny filoha Andry Rajoelina, hoy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto.
Hapetraka mazava ny karama amin’ny maha mpanazatra azy. Efa mitempo ho an’i Madagasikara rahateo ny fony. Hojerena dieny izao ihany koa ireo katita hoavin’ny kitra malagasy amin’ny fananganana Akademiam-pirenena momba ny fanatanjahantena, hoy hatrany ny minisitra Tinoka Roberto.
Fantatra izao fa misy klioba telo ao Egypta te haka an’i Nicolas Dupuis ho mpanazatra.
mercredi, 10 juillet 2019 13:42
Kitra-CAN 2019: Polisy 1 300 no hahetsika eto an-drenivohitra
Polisy 1 300 hanampy ny efa miasa isan'andro no indray hahetsiky ny ministeran’ny filaminana anatiny eto an-drenivohitra rahampitso alakamisy, andro hiatrehan’ny Barea an’i Madagasikara ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika hifandonana amin’ny Voromahery Tonizianina.
Handamina ny fifamoivoizana izy ireo, no hitandro ny filaminana ihany koa.